चीनमा मृतकको शरीरबाट अवैध रूपमा अङ्ग निकाल्ने चिकित्सकहरूलाई जेल
चीनमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मानिसको शरीरबाट अवैधानिक रूपमा अङ्ग सङ्कलन गर्ने छ जनाले जेल सजाय पाएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त गिरोहमा चिकित्सकहरू पनि थिए।
अङ्ग चोर्ने गिरोहले मृतकका परिवारजनलाई वैधानिक रूपमै अङ्गदान गरिएको भ्रममा पार्थ्यो।
सन् २०१७ देखि २०१८ सम्म उक्त गिरोहले आन्हुई प्रान्तस्थित एउटा अस्पतालबाट ११ जनाको शरीरबाट कलेजो र मिर्गौला चोरेको थियो।
अस्पतालमा ल्याइएका कार दुर्घटनाका घाइते र मस्तिष्कमा रगत जमेर मृत्यु भएका बिरामी उनीहरूको तारोमा पर्थे।
उक्त अस्पतालको सघन उपचार एकाइका प्रमुख याङ सुशुनले बिरामीका आफन्तलाई अङ्गदान गर्न इच्छुक भए नभएको सोध्थे। परिवारजनले सहमति दिँदै हस्ताक्षर गरिदिन्थे। तर त्यसका लागि उनीहरूलाई नक्कली कागजपत्र दिइन्थ्यो।
समाचारका अनुसार अनुसार त्यसपछि उक्त गिरोहले ती अङ्गहरू प्रत्यारोपणको पर्खाइमा बसेका व्यक्ति वा अस्पताललाई गोप्य रूपमा बेच्थ्यो।
एउटा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उनले बताएअनुसार त्यसपछि डा. याङलाई त्यसबारे सोध्दा आफूलाई "मौन बस्न" ठूलो रकमको लोभ देखाइयो। "त्यतिबेला गलत कुरा भएको रहेछ भनेर म निश्चित भएँ," शिले भने।
अङ्ग चोरी र तस्करी गर्ने गिरोहका छ जनालाई जुलाई महिनामा "नियतवश शव नष्ट पारेको" अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो। उनीहरूले १० देखि २८ महिनासम्म कारागरामा बस्नुपर्नेछ।
चीनमा बढ्दो मागका कारण धेरै वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका मानिसबाट अङ्ग सङ्कलन गरियो। तर त्यसको संसारभरि आलोचना भयो।
सन् २०१५ मा उक्त चलन रोकियो।
अहिले चीनमा स्वेच्छाले दान दिइएको अङ्ग प्रत्यारोपण गरिन्छ।
चीनमा अङ्गदान दिने दर बढिरहेको भए पनि उक्त दर अरू देशमा भन्दा कम छ। स्पेनमा १० लाख मानिसमध्ये ४९ जनाले अङ्गदान दिन्छन् भने चीनमा सरदर ४.४ जनाले त्यसो गर्छन्।
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १४ लाख ६५ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु भए ?
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहको छ । कोरोना संक्रमणकै कारण हालसम्म विश्वका धरै देशहरु प्रभावित भइरहेका छन् । वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर को...
सिड्नी - अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहर सिड्नीमा शनिबार नोभेम्बर महिना कै उच्च तापक्रम मापन गरिएको छ ।सिड्नीमा अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा महिनाभरिको सबैभन्दा उच्च ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम...
बीबीसी । चीनमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मानिसको शरीरबाट अवैधानिक रूपमा अङ्ग सङ्कलन गर्ने छ जनाले जेल सजाय पाएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त गिरोहमा चिकित्सकहरू पनि थिए। अङ्ग चोर्ने ...